Kit'i TravMed - Medical Aid International
Voangona ao anaty kitapo mena mahery miaraka amina kitapo zava-mahadomelina anatiny, ny entana rehetra dia tena avo lenta ary mora azo. Izany dia ahafahan’ny mpampiasa mitantana toe-javatra isan-karazany sy ilain’ny fikarakarana ara-pahasalamana, manome antoka fa afaka manatanteraka ny asany izy ireo na mankafy fotsiny ny diany amin’ny fomba tsara indrindra sy fahasalamana.
Ity kit ity dia noforonin’i Tim Beacon, talen’ny fitantanana ny International Aid International izay manana mari-pahaizana momba ny fitsaboana amin’ny fizahantany. Izy no mpanoratra ny “The Gap Year Handbook, torolalana tena ilaina amin’ny dia fitsangatsanganana”, izay nampianatra momba ny lalam-pitsaboana ara-tafika ary mandeha matetika any amin’ny tontolo lavitra sy sarotra.
Ny kitapo dia navoaka ho an’ny ekipa UK mandeha any Sierra Leone amin’ny krizy Ebola ankehitriny ary koa ny fanaparitahana hafa.